आखिर कसको खुनपसिना पिएर नेताले विमान चार्टर्ड गर्ने हैशियत बनाए? - Jagaran Post
आखिर कसको खुनपसिना पिएर नेताले विमान चार्टर्ड गर्ने हैशियत बनाए?
Jagaran Post १० माघ २०७८, सोमबार १२:३९
आखिर कसको खुनपसिना पिएर नेताले विमान चार्टर्ड गर्ने हैशियत बनाए त?
प्रसंग आफैबाट शुरु गरौं। दिल्लीस्थित पुरानो चाँदनी चोकको ब्यस्त सडकको फुटपाथमा बिहान ४ बजेदेखि १० बजेसम्म जण्डिसको आयुर्वेर्दिक उपचार गर्ने बाबुछोरा बस्तछन। मैले थाहा पाएअनुसार उनीहरुको त्यो ब्यवसाय त्यहाँ पुस्तौंदेखि चलिआएको छ र ऐलेसम्म लाखौं मानिसले उनीहरुद्वारा गरिने जण्डिसको आयुर्वेर्दिक उपचार पद्धतिको लाभ उठाएका पनि रहेछन।
आजभन्दा करिब १३ बर्षपहिला त्यतिखेर म भारतको मध्यप्रदेशको इन्दौर शहरमा थिएँ। मलाई पनि अचानक जान्डिसको लक्षण देखापर्यो। हातका नङ्ग, शरिरको छालादेखि लिएर आँखा पहेंलै भए। मलाई मेरो बा ले तुरुन्तै दिल्ली आउन भन्नुभयो र दिल्लीस्थित त्यहिं चाँदनी चोकको जन्डिस निको पार्ने स्थानको ठेगाना दिनुभयो। म लगत्तै दिल्ली आएँ र चाँदनी चोक गएँ।
बिहान ४ बज्दा नबज्दै चाँदनी चोक पुगेको अहो, जण्डिसको उपचार गराऊने मान्छेको लाईन त बिहानबिहानै लामै भैसकेको रहेछ। त्यो दिन पालो पाऊन सकिएन। नजिकै त्यहिं आफन्तीकोमा बसेर अर्कोदिन रातीको २ बजे नै उठेर लाईनमा लागें। तैपनि धेरथोर मान्छे त लाईनमा जम्मा भैसकेका !
बिहान ५ बजेतिर मेरो पालो आयो। यसो आँखामात्र हेरे। बस अरु केहि बोलेनन। यौटा कागजको टुक्रोमा तीन छाकको लागि केहि पातको धुलो र अजिनोमोटोजस्तै सेतो र लाम्चो आकारको स्वादहिन (तर त्योअजिनोमोटो हैन) बस्तु मिसाएर साथमा आधा लिटरको बोटलमा उहीँ स्वादहिन पानी ( कुनै स्वाद र रंग नभएकाले पानी नै थियो। तर के गरेको पानी हो थाहा भएन) दिएर पठाए। मूल्य जम्मा ५० रुपियाँ।
उनीहरुले दिएको त्यो औषधि तीनदिनसम्म सेवन गरें, पानी भने एकहप्तासम्म रितबमोजिम लिएँ, पहेंले अर्थात जण्डिस त चट नै भयो ।
आज माओवादी नेता बर्षमान पुन चीनबाट चार्टड विमान गरेर नेपाल आऊने खबर सुनें। जन्डिसको उपचार नेपालमा सम्भव नभएर थाईल्याण्ड रिफर गरिएको थाईल्याण्डमा पनि उपचार हुन नसकेर चीन लगिएको थियो उनलाई। कुन लेवलसम्म उनलाई जण्डिस भएको हो र नेपाल नै उपचार हुन नसकेर थाईल्याण्ड र चीन पुर्याईयो त्यसको बारेमा त माओ नै जानुन। यद्यपि हेमोलाइटिक जन्डिस भन्ने रोग भए/नभएको थाहा पाउन अन्य जाँच गर्नु जरुरी हुन्छ । तर, यसको जेनेटिक जाँच हाल नेपालमा उपलब्ध रहेनछ।
अब प्रश्न यो उठ्छ, सर्वहारा वर्गको उत्थानका लागि भनेर १०/१० बर्षसम्म निहत्था नागरिक धमाधम मारेर जनयुद्धको जगमा आमूल परिवर्तन आएको भन्ने माओवादीका नेताहरु जण्डिसजस्तो सामान्य स्वास्थ्य समस्याको उपचारमा बिश्वकै महंगा र सुविधासम्पन्न अस्पतालमा गएर उपचार गराऊने हैशियत कसरि बनाए? अझ कुरो यतिमा मात्र रोकिएन। उपचारपश्चात नेपाल फर्किंदा विमान नै चार्टड गरेर फर्किने शान, रवाफ र हैशियत कसरि बनाए? कसको खुनपसिना पिएर विमान चार्टर्ड गर्ने हैशियत बनाए?
यो देशमा बर्सेनि हजारौं नागरिक जण्डिसका सिकार भैरहेका हुन्छन। तीमध्ये अधिकांशको स्थानिय उपचार पद्धति या नेपालकै अस्पतालमा उपचार भएर निको भएका छन। कतिपयको भने जन्डिसकै कारण ज्यान पनि गएको छ।
तर, नेपालमैं उपचार हुन नसकेका आम नागरिकले पनि जण्डिसलगायतका गम्भीर प्रकारका बिमारीमा बिदेश गएर उपचार गराऊन सक्ने हैशियत हुने कि नहुने? फर्किंदा विमान नै चार्टड गरेर फर्किने हैशियत हुने या नहुने?
यति धेरै माथीसम्म त नसोंचौ होला। विगतमा बर्षमान पुनको पारिवारिक एवं आर्थिक हैशियत हेरौं र आजको हैशियत हेरौं। बिश्वका महंगा अस्पतालमा गएर उपचार गराऊने मात्र हैन, उपचार गरि स्वदेश फर्किंदा विमान नै चार्टड गरेर फर्किने हैशियत बनाए। यस्तो फजुल खर्चको लागि नेतासंग पैसा कहाँबाट आयो? स्रोत के हो?
आम नागरिकले जटिल रोगको उपचार बिदेशमा गर्नसक्ने त के नेपालकै सामान्य अस्पतालमा समेत उपचार गर्नसक्ने हैशियतमा छैनन। तर, तिनै जनताले खुनपसिना बगाएर तिरेको करको दुरुपयोग गर्दै र तिनै निमुखा जनताको अमूल्य भोटको माध्यम सत्तामा पुगेका नेता भने बिदेशका आलिसान अस्पतालमा गएर उपचार गर्ने हैशियत बनाए। विमान चार्टड गरेर यात्रा गर्ने हैशियतका भए। कम्तिमा जटिल प्रकारका रोगको उपचारको लागि सरकारले नेपालमैं अत्याधुनिक सेवासुविधासहितका अस्पताल र उपचारलाई सस्तो एवं सर्वसूलभ बनाईदिएको भए पनि त नेताको उपचारको बारेमा यतिविघ्न चासो र आक्रोश उत्पन्न हुने त थिएन। गरिब जनता अस्पतालमा उपचारको पैसा तिर्न नसकेर अस्पतालमैं बन्धक बनाईन्छन, झ्यालबाट हाम फालेर आत्महत्या गर्दछन। अस्पतालकै पंखामा झुण्डिएर आत्महत्या गर्दछन, तिनै गरिब जनताको छातीमा टेकेर आखिर विमान चार्टड गर्नेसम्मको हैशियत कसरि बनाऊँछन नेताले? कुन नैतिकता र आदर्शले?
साथमा यो पनि पढ्नुहोस – नेताहरुको बिदेशी उपचार मोह
१.पाल्पा तानसेनको मेयरमा कांग्रेसका श्रेष्ठ र उपमेयरमा माओवादीकी सिंजाली विजयी
२.उदयपुरमा कार दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु , चारजना घाइते
३.ओलीको गृह नगर दमकमा १५ मतले राप्रपा अगाडि
४.भरतपुरमा रेणुको १३ सय मतको अग्रता
५.रुपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिका अध्यक्षमा कांग्रेसका बस्याल निर्वाचित
६.पाँच दललाई हराउदै गोकर्ण विष्टको क्षेत्रमा एमाले एक्लैले जित्यो मेयर उपमेयर
७.मध्यपुरथिमि नगरपालिकाकाे मेयरमा कांग्रेस र उपमेयरमा माओवादी विजयी
८.भाईरल वडा अध्यक्षका उम्मेदवार १०० मतले विजयी
९.सिरहाको नवराजपुरमा जसपाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष निर्वाचित
१०.झलनाथको निर्वाचन क्षेत्रमा गठबन्धनलाई हराउँदै एमालेका थेबे अध्यक्षमा निर्वाचित